VFX Legion dia manokatra ny voka-pandrefesana ho an'ny 'MA', horonantsary mampihoron-koditra - NAB Show News amin'ny Broadcast Beat, fampielezam-peo ofisialin'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Content Creation » Audio » Ny Vondrona VFX dia manokatra ny voka-pandrefesana ho an'ny 'MA', sarimihetsika mahatsiravina
VFX Legion dia mamorona FX ho an'ny 'MA'
Ny Vondrona VFX dia manokatra ny voka-pandrefesana ho an'ny 'MA', sarimihetsika mahatsiravina
VFX Legion niasa vao haingana tao amin'ny 'MA', sarimihetsika sarimihetsika ara-pihetseham-pihetsiketsehana antsoina hoe Blumhouse Productions, izay nisokatra tao amin'ny teatra tamin'ny May 31st. Ny studio-ny nahazo mari-pankasitrahana dia nanaparitaka ny traikefan'ny orinasa izay manimba ny endriny ary manaparitaka ny sarin'ireo fampisehoana mahazatra mba hamolavolàna sary isan-karazany amin'ny sary an-tsary izay mampitombo ny fiantraikany amin'ny endrika sangan'asan'ny sarimihetsika sasantsasany sy mampihetsi-po.
Ny horonantsarin'ny horonantsary dia ny lozisan'ny Legion. Ny orinasa LA / BC dia namorona sary vongana ho an'ny horonantsary lava malaza ao amin'ity karazana ity, anisan'izany ny horonan-tsarin'i Blumhouse, toy ny 'Sinister 2', 'Insidious: Chapter 3,' 'Ouija,' Amityville: The Awakening ' ary sarimihetsika roa avy amin'ny franchise 'Purge'.
Ny sarimihetsika farany momba ny famokarana, 'MA', dia nanaraka ny tantaran'i Sue Ann (Oscar mpandresy Octavia Spencer,) vehivavy iray efa zokinjokiny miaina fiainana tsotra. Miala tsiny, maneso, ary mihitsoka any amin'ny lisea, ireo traumas taloha dia mamela ny fanangonam-pony amin'ny 'fitting in.' Raha misy vondron-jatovo tsy ampy taona manosika azy hividy azy ireny, dia mahita fahafinaretana i Sue Ann mba hahazoana namana sasany.
Ny fahazoana mombamomba ny reny dia mahazo ny fahatokisan'ny zatovo azy, manitatra ny fandraisam-bahiny ao an-tranony ho toeram-pialofana azo antoka ho an'ny fisotroan-dronono ataon'izy ireo.
Tsy ela dia manomboka mampiditra ny tenany eo amin'ny fiainany izy ireo, ary ny fety sy ny filalaovana dia mamadika ny nofy ratsy mahatsiravina rehefa mamaly faty noho ny fijaliana izay niaretany am-polony taona maro lasa.
(FANAMPIM-PAHATAHIANA: Misy mpiloka mipoitra ity manaraka ity!)
Rehefa miposaka ny tebiteby, ilay mpandray anjara ratsy dia mivoaka avy amin'ny namana ho babo, mitazona ny zatovo babo ao am-pandriany rehefa miezaka ny hampijaly azy ireo amim-pahatoniana. Mandritra ny seho an-dranomandry iray, dia manjaitra ny molotry ny ankizivavy iray i Ma. Ny prostetika nampiharina teo amin'ny tarehiny dia nahatonga ny sarimihetsika mahazatra mba hanangonana ny fananganana, miaraka amin'ny vokatra mahatsikain'ny Legion izay mampitombo ny tena zava-misy amin'ny fitevehana ny nofony.
Sary iray avy amin'ny 'MA'
Ny fanamarihana ny tratran'ny tovolahy iray miaraka amin'ny vy mena iray antsoina hoe mpanakanto mba hamoronana vovoka sy setroka avy amin'ny solosaina izay mivoaka avy amin'ny hodiny rehefa mifamatotra ny vy, ary koa ny henam-barotra mena sy ny mararin'ny menaka sisa tavela. Ny Legion no nanadio ny sehatra ary namoaka andian-tsarimihetsika izay nanonona tamim-pahamendrehana ny sary namboarina tamin'ny sary sy ny fahatsapana ny lahatsary velona.
Ny vokatra hita maso dia niankina tamin'ny sehatra farany tamin'ny sarimihetsika, izay mampiseho ny trano fandrehitra afo sy ny fiposahan'ny rivotra ary farany mandany ny rafitra. Ny ekipan'ny mpanakanto ao amin'ny Legion dia namorona fiarovan-doha CG miaraka amin'ny lanjany sy ny lozam-pifamoivoizana mba hanamboarana ny trano, ny fandrakofana ny setroka, ny boribory, ary ny fandoroana rivotra mba hampidirina ny haitao sy ny halaliny.
"Ny fizarana farany dia nanolotra ireo fanamby lehibe sy ara-teknika lehibe indrindra," hoy ny talen'ny VFX Legion Creative, James David Hattin. "Mamarana ilay sarimihetsika miaraka amin'ny fitifirana fitifirana lozam-pifamoivoizana avy amin'ny drone izay manomboka lavitra ary mandalo amin'ny trano mampiseho ny fomba fijerin'ny 360 azy io. Ankoatra ny fametrahana ny famokarana, dia nisy ny tifitra natao mba hiantohana fa tsy misy fisalasalana raha tsy misy ny fisian'ireo olona mbola ao anaty. "
Alohan'ny + Taorian'ny Farany Farany-CG afo / VFX
Ny hetsika fakantsary teo aloha dia tsy naharitra, noho izany, ny Legion dia nasaina naka sary an-tsary ny tale tale Taylor Tate Taylor momba ny fotoana farany amin'ny sarimihetsika. Ny famoronana andian-tsarin'ny CG miaraka amin'ity fahitana midadasika ity dia nitaky ny modely amin'ny trano natsangana avy amin'ny tabataba, ary avy eo napetraka tamin'ny inferno iray amin'ny solosaina.
"Tsy napetraka nandritra ny tifitra ny ekipanay, noho izany dia tsy nanana scan ny trano na tsipiriany an-tsoroka izahay", hoy i Hattin. "Nanolotra ny karazana fanamby izay mahatonga ny fantsom-pamokarana an'i Legion ho sarobidy. Ny fanamafisana ny fahaizantsika miasa toy ny tarika tokana miaraka amin'ny talenta iraisam-pirenena amin'ny talenta, dia nanatona ny modely fanorenana maoderina sy CG Artist, Mark-hennessy-Barrett any Londres. "
Miasa amin'ny fandaharam-potoana henjana miaraka aminà sarimihetsika sary nalaina avy amin'ny drone, ary lahatsary avy amin'ny sarimihetsika ho toy ny references amin'ny sary, dia nanamboatra 'hamotika', marika tamin'ny antsipiriany ilay trano. Vantany vao nahavita ny modely i Hennessy-Barrett, dia afaka nanomboka niasa ny Legion. Ny mpanakanto dia namorona lelafo nipoitra avy any amin'ny varavarankely tsirairay avy, nandoro sy nanadio ny ivelany ny trano, ary ny CM nifoka, niaraka tamin'ny rambony ary ny korontana. Ny famoahana farany dia namerina indray ny fandefasana kamerà mahafinaritra, mamarana ny sarimihetsika miaraka amin'ny fomba fijery tokana tokana momba ny tranon'ny Ma miondrika ao anaty afo.
"Ny andian-dahatsoratra CG izay noforoninay, ny sasany amin'ireo lelafo novolena tao Houdini mba handrakotra ny ampahany amin'ny tafo dia tsy nahasakana ny hetsika fakantsary manontolo", hoy ny lohan'ny Legion's Production, Nate Smalley. "Nisafidy ny hampiasa sary avy amin'ny rakitra ActionVFX izahay. Ny famolavolana ireo singa avo lenta amin'ny tifitra dia namatsy vahaolana mahomby, nitazona ny fahamarinan-tsakafo, ary nitazona anay tamin'ny fandaharam-potoana. "
"Ny ekipan'ny Legion dia mientanentana foana rehefa miantso isika hamorona sary vongana ho an'ny sarimihetsika Blumhouse, ary ny MA dia tsy mahagaga, hoy i Hattin. "Faly be izahay fa afaka niara-niasa tamin'izy ireo indray ary niavonavona tamin'ireo mpanakanto izahay mba hamahana ny fanamby rehetra izay 'natolotr'i MA.'
Ny fifangaroana fitaovana sy rindrambaiko ampiasaina hananganana ny VFX ho an'ny 'MA', Redshift ho an'ny famoahana CG shots, Maya ho an'ny animation, ary Houdini ho an'ny simulations, miaraka amin'ny teknolojia manokana an'ny Legion.
Miorina ao Burbank sy British Columbia, ny VFX Legion dia manolotra amin'ny famoahana fahitalavitra episodika ary ahitana sarimihetsika ahitana sary mahatsikaiky avo lenta izay mahazo ny ankamaroan'ny tetibola. Natao tao amin'ny 2013 miaraka amin'ny fantsom-pampierana eo amin'ny fotony, mpanorina, CD, Senior Visual Effects Supervisor, James David Hattin, ary ny ekipa mpitantana ny tontolon'ny mari-pahaizana ao amin'ny studio, ny mpanohana ny fanohanana, ary ny vondron'olona 80 + ny fanavaozana ny vokatra azo avy amin'ny maso amin'ny tetikasa marobe miaraka amin'ny teboka avo be sy ny fe-potoana mafy.
Ny asan'ny Legion dia ahitana andian-dahatsary amin'ny TV, toy ny hoe 'Ahoana no handehananao amin'ny famonoana,' 'Sekretam-behivavy,' '' scandal, 'Suits,' 'El Chapo,' Eye Candy, '' Revolution, 'ary' Mandeha, ' name vitsivitsy. Ny 'Hardcore Henry', 'Sinister 2', 'The Purge: Year Election' sy 'Ny Purge: Anarchy' dia anisan'ny sarimihetsika ho an'ny sarimihetsika ao amin'ny studio. Mifandraisa amin'ny fampahalalana bebe kokoa momba ny VFX Legion sy ny tolotra nataony: , [mailaka voaaro], 818.736.5855.
DATY AMPIHARANA: May 31, 2019
FIRENENA MIKASIKA NY TONTOLO IAINANA: VFX Legion LA / BC
Mpanara-maso akaiky ny maso: James David Hattin
Mpanamboatra Visual Effects: Nate Smalley
Mpandrindra ny maso mahomby: Matthew Noren, Lexi Sloan
Mpanolotsaina CG: Rommel S. Calderon
Mpanambatra: Nick Guth, Allan Torp Jensen, Christopher Klassen, John R. McConnell, Brad Moylan, Milton Muller, Eugen Olsen, Kevin Shawley, Dan Short
Advocate Aurora Health Campaign / Ny Colonie Fampahalalam-baovao mivantana-sosialy Fampitana-SocialMedia Fampitana-SocialMeida CGI Drone Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor SJGolden - Spears & Arrows THE COLONIE / Chicago TV Technology Ultra HD Forum VFX VFX ho an'ny horonantsary VFX Legion	2019-06-21
Previous: Videographer - Video Editor
Next: Sony AI-Based Edge Analytics Appliance sy Midsize Laser Projectors nomena ny InfoComm "Best of Show" Honors